Induction kudzimisa muchina maturu ekuomesa pamusoro maitiro
musha / Applications / Induction Kurwisa / Induction Inodzima Muchina
Induction Inodzima Muchina
Categories: Induction Kurwisa, Induction Kurwisa Machine Tags: tenga induction quenching muchina, yakakwira frequency kudzima, yakakwira frequency kudzima muchina, yakakwira frequency kudzima system, induction kudzima, induction kudzima michina, induction unopedza hita, induction kudzima muchina, induction kudzima muchina maturusi, induction inodzima shaft, kuburitsa kudzima system, induction pamusoro kudzima, kudzima, kudzima giya, kudzima system, kudzima kwepamusoro
CNC Induction Inodzima Mashini Maturu
Induction kuoma inoshandiswa kunyanya kuomesa / kudzima kwekutakura nzvimbo uye shafeti pamwe nezvikamu zvakaumbika zvakaomarara panongoda kudziirwa chete nharaunda.
Kubudikidza nesarudzo yehuwandu hwekushanda kweiyo induction heat system, iyo yakadzika kudzika yekupinda inotsanangurwa.
Pamusoro pezvo, zvinogona kutorwa sarudzo kana nzvimbo iyi ichifanira kuomeswa mumhepo, nemvura kana neyakaomesesa emulsion. Zvichienderana nesvikiro rinotonhora, akasiyana madhigirii eukukutu anowanikwa.
Induction kuoma inogona kuzadzikiswa senge bhuku remanyorero kana otomatiki mhinduro Iko kune zvakare mukana wekuomesa mune inoenderera maitiro.
Inokodzera kuomesa uye kupisa kweakasiyana emabasa ekushandira, senge kuomesa kuomesa shafti, magiya, njanji dzinotungamira, disc, mapini, uye zvimwe zvikamu;
Iine mashandiro ekuenderera kuomesa, kuomesa panguva imwe chete, zvikamu zvakaomarara kuomarara, uye kuomesa kuomesa panguva imwe chete;
Shandisa nhamba yekudzora sisitimu kana PLC uye frequency kutendeuka yekumhanyisa mirawu system kuti uone yekumisikidza workpiece uye kuongorora, uye kubatanidza PLC uye induction kudziyisa magetsi emagetsi kuti azive zvizere zvoga zvigadzirwa.
Vertical (kuomesa kwema shaft zvikamu) + yakatwasuka (kuomesa kwemageri mhete zvikamu)
Kuomesa ndeimwe ye HLQ induction kudziyisa masimba masisitimu makuru ekushandisa nzvimbo. Mazana emhinduro dzedu dzinoomesa dziri kushanda kutenderera pasirese-mazhinji acho ari muindasitiri yemotokari.
Iyo huru kubatsirwa kweiyo induction kupisa yekuomesa ndeyekuti zvinotora mashoma mashoma masekondi. Muchoto, maitiro akafanana anogona kutora maawa kana mazuva. Izvi zvinogoneka sei?
Mhinduro ndeyekuti induction inoshamisa pakuburitsa kupisa nekukurumidza. Izvi, zvakare, zvinoreva kuti iwe unogona kusanganisa kuomesa mune yekugadzira maitiro. Kuomesa muchoto, kune rimwe divi, kunotora nguva (kukuru kupisa kurasikirwa) uye kunoda kufambisa izvo zvikamu kungave kune kwako choto kana kune icho cheye subcontractor.
In-mutsara kubatanidzwa kwekuomesa kunoderedza yako yekufambisa nguva zvakanyanya.
Iwe unowana kutonga kuzere pamusoro pehunhu, nguva dzekuendesa uye mutengo. Iko hakuna kudikanwa kwekutakura kilos yezvinhu kumashure uye kumberi, iyo inochengetedza simba uye nharaunda.
HLQ Induction Heating Power Systems ine makore mazhinji echiitiko mukumisikidza kuomesa uye kupisa kweakasiyana emabasa. Pamwoyo peimwe neyakaomarara system ndeye HLQ Induction Heating Power Systems Induction Heat Power Sosi, iyo indasitiri yakanyanyisa induction frequency converter. Aya anoshandurwa ekushandura anobatsira kuve nechokwadi chakanyanya kuomesa mhedzisiro-zuva nezuva, gore negore
The induction hardening machine inosanganisira Vertical Scanning, Horizontal (isina nzvimbo) Kuongorora uye michina yakagadziriswa- uye serial uye / kana yakafanana yakabhadharisa induction simba masosi ane huwandu hwakasiyana hwekubuda kwesimba uye mafrifits.
Iyi nhepfenyuro yekuomesa muchina chishandiso inoshandisa manhamba ekudzora tekinoroji, ine inoenderera, panguva imwe chete, chikamu-chinoramba chichienderera uye chikamu-chakasimudza mabasa ekudzima, inonyanyo shandiswa induction kudzima shafiti, discs, pini uye magiya, uye inoratidzwa neakakwira kudzimisa chaiyo. kuomesa muchina chishandiso chinoshandiswa nekubatanidza nepakati frequency, superaudio frequency, yakakwira frequency uye ultrahigh frequency induction kudziya muchina.
CNC kudzima / kuomesa muchina chishandiso chinhu:
CNC sisitimu: Iyo yakakwira-frequency kudzima muchina CNC system inogona kuumbiridza uye kuchengetedza akasiyana siyana ekudzima maitiro mapurogiramu zvinoenderana akasiyana workpiece zvinodiwa.
HMI: programming mhando uye yemuchina yemuchina interface inoratidzira muChirungu neChina.
Chengetedza kugadzirisa: inogona kudzora simba rekudziya kutanga, kumira, kupisa zvikamu uye kutonhora nguva, kumhanya kutenderera uye nekumhanyisa kumhanya.
Lathe: tora yakarongedzwa simbi ine yakanaka ngura-chiratidzo mabasa.
Pamusoro pekugadzirisa zvikamu: kutora magetsi ekugadzirisa, kuti uone kushaya kwehurefu hwakasiyana chidimbu chebasa.
Basa tafura sisitimu: teedzera bhora sikuruu uye servo mota kutyaira, kutyaira mwenje, yakakwira gwara chaiyo uye chaiyo Positioning.
Main mugodhi kutenderera hurongwa: nemafungiro shanduka kakawanda maitikiro kuona zvikamu kutenderera havukavu kuramba kugadziridzwa.
Electric control chikamu: chishandiso chemuchina chine simba-kusunungura chengetedzo basa, ine yakanyanya kuchengetedzeka uye kuvimbika.
Chimiro: chakagadzirwa neakakora simbi mahwendefa, ine hwindo uye inotsvedza masuo, kudzivirira mvura kuputika, nyore kurongedza zvikamu uye kuongorora kuomesa maitiro.
CNC yakamira kuomesa / kudzima muchina chishandiso
Zvinoenderana neakasiyana epa workpiece, pane mhando yakatwasuka, yakatwasuka mhando,yakavharwa mhando, yakagadzirirwa mhando, nezvimwe.
1.Standard SK-500 / 1000/1200 / 1500 workpiece chinofamba mhando For miseve, discs, nembambo uye magiya kuomesa
2.SK-2000 / 2500/3000/4000 Transformer inofamba mhando, Inoshandiswa pakupisa urefu kupfuura 1500mm shaft
Rudzi rwakavharwa: Yakatarirwa shaft hombe, Yakawanda yakachena nzvimbo yebasa.
4.Horizontal kuomesa muchina chishandiso
SK-500/1000/1200/1500/2000 / 2500/3000/4000 Inoshandiswa pakutsetseka
mhando SK-500 SK-1000 SK-1200 SK-1500
Kureba kukuru kwekushisa （mm） 500 1000 1200 1500
Max kudziyisa dhayamita （mm） 500 500 600 600
Max akabata urefu Max mm） 600 1100 1300 1600
Max uremu workpiece, KG） 100 100 100 100
Workpiece kutenderera kumhanya （r / Maminitsi） 0-300 0-300 0-300 0-300
workpiece inofamba inomhanya （mm / min min 6-3000 6-3000 6-3000 6-3000
Nzira yekuyevedza Hydrojet kutonhora Hydrojet kutonhora Hydrojet kutonhora Hydrojet kutonhora
chiyamuro voltage 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz
Motor simba 1.1KW 1.1KW 1.2KW 1.5KW
Divi LxWxH (mm) 1600 x800 x2000 1600 x800 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3200
uremu （kg） 800 900 1100 1200
mhando SK-2000 SK-2500 SK-3000 SK-4000
Kureba kukuru kwekushisa （mm） 2000 2500 3000 4000
Max kudziyisa dhayamita （mm） 600 600 600 600
Max akabata urefu Max mm） 2000 2500 3000 4000
Max uremu workpiece, KG） 800 1000 1200 1500
workpiece kutenderera kumhanya （r / min） 0-300 0-300 0-300 0-300
Motor simba 2KW 2.2KW 2.5KW 3KW
Divi LxWxH (mm) 1900 x900 x2400 1900 x900 x2900 1900 x900 x3400 1900 x900 x4300
uremu （kg） 1200 1300 1400 1500
CNC kuomesa / kudzima muchina chishandiso chinhu:
1.CNC system: Iyo yakakwira-frequency kuomesa muchina CNC system inogona kuumbiridza uye chengetedza dzakasiyana siyana dzinodzima maitiro zvirongwa zvinoenderana zvakasiyana workpiece zvinodiwa.
2.HMI: programming mhando uye yemuchina interface yemunhu inoratidzira muChirungu neChina.
3.Control chinja: inogona kudzora iyo yekupisa simba kutanga, kumira, zvikamu kupisa uye kutonhora nguva, kutenderera kumhanya uye kufamba kwekumhanya.
4.Lathe: tora yakarongedzwa simbi ine yakanaka ngura-chiratidzo mabasa.
5.Top kugadziridza zvikamu: kutora magetsi ekugadzirisa, kuti uone kushaya kwehurefu hwakasiyana chidimbu chebasa.
6.Work tafura sisitimu: tevera bhora sikuruu uye servo mota kutyaira, kutyaira mwenje, yakakwira gwara chaiyo uye chaiyo Positioning.
7.Main mugodhi kutenderera hurongwa: nemafungiro shanduka kakawanda maitikiro kuona zvikamu kutenderera havukavu kuramba kugadziridzwa.
8.Electric control chikamu: chishandiso chemuchina chine simba-inosunungura chengetedzo basa, ine yakanyanya kuchengetedzeka uye kuvimbika.
9.Frame: chinoitwa gobvu simbi mahwendefa, pamwe hwindo uye zvishoma nezvishoma mumatope mikova, kudzivirira mvura ikatapukira, nyore kuti vapinze zvikamu uye tarisisa induction hardening Process.
Induction Pamusoro Kuomesa Shaft yeArmature Shaft
Otomatiki Gears kuomesa muchina